चायाँ परेर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नलिनुस्, यसो गर्नुस् ! – Online Marg
चायाँ परेर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नलिनुस्, यसो गर्नुस् !
Posted on Sunday, January 12th, 2020 6:09 PM Sunday, January 12th, 2020 6:09 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
जाडो मौसममा कपालमा परेको चायाँले निकै दुःख दिन्छ । कपालबाट चायाँ खस्ने डरले कतिपय मानिसले जाडोयामभर गाढा रंगको लुगा नै लगाउँदैनन् । यति मात्रै होइन चायाँले कपाल टुट्ने, छाला सुक्खा हुने जस्ता समस्या पनि निम्त्याउछ । यसकारण चायाँको उपचार समयमै गरिएन भने कपाल झरेर तालु बन्न पनि बेर लाग्दैन ।
चायाँ पर्नुको मुख्य कारण कपालको राम्रो देखभाल नगर्नु नै हो । यसबाहेक धुलो धुवाँ, स्याम्पुको गलत चयन, अनावश्यक हेयर ट्रिटमेन्ट, शरीरमा हर्मोनको गडबडी आदि कारणले पनि चायाँ पर्छ । यदि कपालको सरसफाई र खानपानमा विशेष ध्यान दिने हो भने ५० प्रतिशतसम्म समस्या ठीक हुने विभिन्न अध्ययनले जनाएका छन् । यसबाहेक निम्न घरेलु उपायबाट पनि चायाँ हटाउन सकिन्छ ।
जानौँ चायाँ हटाउने पाँच घरेलु उपाय स् ओटमील मास्क ओटमीलमा कपाललाई पोषण दिने तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ । यसले कपाललाई पोषणकाका साथै चायाँ पनि हटाउँछ । ओटमीलको हेयर मास्क बनउन सबैभन्दा पहिले आधा कप ओटमील, एक चम्चा बादामको तेल र चार चम्चा मन तातो दूध लिने । सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिसाउने र गोलाकार शैलीमा कपालमा लगाएर मसाज गर्ने ।
एक घन्टासम्म उक्त मास्क कपालमा लगाई राख्ने । त्यसपछि मन तातो पानीले कपाल धुने । यो मास्क सातामा दुई पटक लगाउनु पर्छ । यसले कपालमा भएको चायाँ हराउँछ । दही–लेमन मास्क दही र कागती भिटामिन सी को राम्रो स्रोत हो ।
दही र कागतीको मास्क कपालका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । दही र कागतीको मास्क बनाउन एक कप दहीमा दुई चम्चा कागतीको रस र एक चम्चा मह राखेर घोल्ने र सो मास्कलाई कपालको जरामा लगाउने र केही समय सुक्न दिने । करिब एक घन्टापछि मन तातो पानीले कपाल धोएर नरिवलको तेल लगाउने । दही र कागतीले कपालमा भएको चायाँलाई हटाउँछ भने महले कपाललाई पोषण दिन्छ ।
अडहुल फूलको मास्क अडहुल (घण्टे) फूल बारे प्रायः सबैलाई थाहा होला । यो फूल पूजा गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । रातो र गुलाफी रंगको अडहुलको फूल छाला र कपालको लागि लाभकारी मानिन्छ । यो फूलको मास्क बनाउन ६–७ वटा अडहुलको फूललाई पानीमा उमाल्ने र त्यसपछि पेस्ट बनाउने । अब उक्त पेस्टमा तीन चम्चा मन तातो नरिवलको तेल राखेर मिक्स गर्ने । तयारी पेस्टलाई कपालको जरामा लगाउने र हातले मसाज गर्ने । करिब दुई घन्टापछि कपाल राम्रोसँग धुने । अडहुलको फूलमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन सी र एमीनो एसिड पाइन्छ ।
जसले कपाललाई बलियो बनाउनुका साथै ड्यान्ड्रफरहित पनि बनाउँछ । अन्डा मास्क अन्डा कपालको लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसैले अन्डाको प्रयोग स्याम्पु बनाउनेहरूले पनि गर्ने गर्छन् । अन्डाको मास्क बनाउन अन्डाको सेतो भागलाई छुट्याएर राख्ने । त्यसमा दुई चम्चा ओलिभ आयल राखेर राम्रोसँग घोल्ने ।
जब उक्त मिश्रण गाढा पेस्टमा परिणत हुन्छ त्यसपछि औँलाको सहायताले कपालको जरामा लगाउने । करिब आधा घन्टासम्म कपालमा लगाई राख्ने र त्यसपछि कपाल धुने । अन्डाले कपाललाई सिल्की बनाउनुका साथै चाँयाबाट मुक्त राख्छ । केराको मास्क केरा एक यस्तो फल हो जुन बाह्रै महिना सहजै पाइन्छ । केरामा विभिन्न प्रकारका औषधिजन्य गुण हुनाले कपाललाई पनि फाइदा पुर्याउँछ ।
केराको हेयर मास्क बनाउनका लागि एउटा पाकेको केरालाई राम्रोसँग पेस्ट बनाउने । त्यसपछि सो पेस्टमा एक चम्चा मह, एक चम्चा कागतीको रस र एक चम्चा बदामको तेल राखेर घोल्ने । तयार पेस्टलाई राम्रोसँग कपालको जरामा लगाउने र करिब एक घण्टापछि धुने । यो हेयर मास्कले चायाँ हटाउनुका साथै कपाल मुलायम र चम्किलो पनि बनाउँछ ।
आँखा कमजोर हुनबाट बचाउने खानेकुराहरु
पछिल्लो समय आँखा कमजोर हुने समस्या बढ्दै गएको छ । मानिसहरू जतिखेर पनि स्मार्टफोनमा झुण्डिरहने भएकाले आँखामा खराब असर परिरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । बच्चाहरू पनि आँखा कमजोर भएर चश्मा लगाउन थालेका छन् । त्यसैले मोबाइल, ट्याब्लेट र ल्यापटपको प्रयोग कम गर्नुका साथै निम्न लिखित स्वास्थ्यवर्द्धक खानेकुरा खाए आँखा कमजोर हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
शरीरमा भिटामिनको कमी हुँदा आँखा कमजोर हुन्छ । आफ्नो आहारमा भिटामिन ए, बी, सी र ई भएका आहार समावेश गर्नु अत्यावश्यक छ । सुन्तला, मौसम, केरा, लौका, किवी, भेडेखुर्सानी, हरियो सागसब्जी र भुइँकटहर जस्ता खानेकुरा खानुस् । मुङ्फली बदाम, जुस र दुधबाट बनेका आहारले पनि फाइदा गर्छन् ।
बदाम आँखाका लागि लाभदायक हुन्छ । राति पानीमा बदाम भिजाएर बिहान खानुस् । यसले आँखा पनि बलियो बनाउँछ अनि स्मरणशक्ति पनि बढाउँछ । बदाममा सूप र मिश्री मिसाएर खाँदा पनि लाभ हुन्छ ।
आँखाका लागि क्यारोटिन लाभदायक हुन्छ र हरियो सागपातमा यो तत्त्व भरपूर भेटिन्छ । यसले आँखाको पुतलीमा सकारात्मक असर पार्छ । यसलाई आफ्नो आहारमा अवश्य समावेश गर्नुस् ।
ओखरमा ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिड भरपूर हुन्छ । आँखाको ज्योति बढाउन बच्चाहरूलाई नियमित रूपमा ओखर खुवाउनुस् । यी खाने कुराको नियमित र सन्तुलित रुपमा उपभोग गरे आँखा कमजोर हुनबाट जोगिन्छ । -एजेन्सीको सहयोगमा
Posted in देश समाचार, स्वस्थ मार्ग
राजधानीको अनामनगरमा ट्राफिक प्रहरीले प्रहरीकै गाडीमा ह्विल लक ग�
म मर्न तयार छु, जनताको बिश्वास मर्न दिन्न: रवि लामिछाने
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा सञ्चारकर्मी रवि लामिछ
लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा
लगातार तीन दिन अर्थात यही माघ १०, ११ र १२ गते सार्वजनिक बिदा दिइएको �
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले आइतबार ब�
एकाएक सरकारले गर्यो भोली आइतवार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय
आइतवार सार्वजनिक विदा दिने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । माघ ५
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गर्यो यस्तो प्रक्षेपण, सतर्कता अपनाउन आग्रह !
आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुने अनुमान गरिएको छ । केही दिनदेखि जार�
आस्था राउत जुनसुकै बेला प’क्राउ पर्न सक्ने
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक सुरक्षा कार्यालय�
परिवारसहित लामिछानेले त्रिशुलीमा किन हाम फाले ?
पत्नी र दुई छोरासहित त्रिशुली नदीमा हामफालेका विनय लामिछानेले ऋण�
पतञ्जलिको जन्म नेपालमै भएको पुष्टि, भेटिए यस्ता प्रमाणहरू
भारतमा जन्मेको भनिएका योग प्रवर्तक पतञ्जलि नेपालमै जन्मेकोबारे �